Dilalka madaxda dawlada oo ku soo kordhaya Puntland & dawladda oo wacad ku martay in ay tallaabo qaadi doonto. – Radio Daljir
Janaayo 20, 2010 12:00 b 0
Garowe, Jan 20 ? Muddooyinkii ugu danbeeyey deegaannada Puntland ayaa ku soo kordhayey falal gurracan oo aan horay looga badan Puntland, kuwaasi oo iskugu jira dilal qorshaysan, qaraxyo iyo bambaanooyin indho iyo dhaga la?aan ah oo lala bartilmaameedsanayey bulshada qaybaheeda kala duwan.
Falalkaasi oo ah kuwo ugub ku ah deegaannada Puntland ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay halka iyo cidda loo malaynayo in ay soo maleegtay, waxaana dawladda iyo inta badan shacabka Puntland ay ku tilmaameen in ay yihiin falalkaasi kuwo Puntland bannaankeeda laga soo abaabulo ay ay hormuud u yihiin kooxo diidan nabadda iyo hormarka ka jira dhulka Puntland.
Qaar kaloo ka mid ah bulshada ku dhaqan Puntland iyana waxay aaminsan yihiin falalkaasi gurracan in aysan ka faro marnayn qaar ka mid ah bulshada reer Puntland, iyagoo daliil ka dhigayaa, marna in uusan fulin karin fal gurracan qof gobolka kale ka yimid haddii uusan gacan iyo gabaad toona ka haysan dadka deegaanka.
Tan iyo sanadkii la soo dhaafay ee 2009, iyo waliba sanadkaan cusub ee 2010, deegaannada Puntland waxaa lagu dilay dad magac iyo maamuus weyn ku dhax lahaa bulshada, kuwaasi oo iskugu jiray bulshada qaybaheeda kala duwan, ayna ku jireen, wasiirro, xildhibaanno, saraakiil ka tirsan dawladda, iyo wax ku ool kale oo muhiimad weyn ugu fadhiyey dadka iyo deegaannada Puntland-ba.
29-kii Bishii April sanadkii tagay ee 2009, bartamaha magaalada Galkacyo waxaa qarax miino lagu dilay taliyihii ciidanka sirdoonka Puntland ee PIS qaybta gobolka Mudug Col. Yaasiin Axmed Talwaayey, waxaana qaraxaasi oo ahaa mid waddo dhinaceed lagu aasay, waxaana loo qabtay mid ka mid ah raggii ka danbeeyey dilkiisa, kaasi oo lagu maxkamadeeyey Galkacyo kadibna la toogtay.
5-tii Bishii August ee isla sanadkii 2009-ka isla magaalada Galkacyo bartamaheeda waxaa si bareer ah loogu toogtay wasiirkii warfaafinta Puntland alla ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac ?Seefta Bannaanka?, waxaana wasiirka dilkiisa ka danbeeyey rag badley hubaysan ah, kuwaasi oo markii ay dilka gaysteen baxsaday.
Raggii ka danbeeyey dilka wasiirka warfaafinta, oo tiradoodu lagu qiyaasay illaa 4 nin, ayaa maxkamad ku taalla magaalada Garoowe laba ka mid ah raggaasi ay ku caddeysay in ay dilka wasiirka wada gaysteen oo ay xabadaha wasiirka lagu dilay ay wada rideen, kuwaasi oo ay maxkamaddu ku ku ridday xukun dil ah, inkastoo ay wali baxsad ku maqan yihiin.
11-kii Bishii November, magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso waxaa lagu kala dilay xildhibaan ka tirsan golaha wakiillada Puntland iyo guddoomiyihii maxkamadda sare ee magaalada Boossaaso.
Xildhibaan Ibraahim Cilmi Gaab, oo ka mid ahaa mudanayaasha ugu faca weyn xildhibaannada Puntland, lagana soo dooran jiray gobolka Mudug, ayaa habeenkaasi 11-ka November lagu toogtay goob maqaaxi ah oo shaaha lagu cabbo oo ku taalla magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana isla markiiba baxsaday raggii dilkaasi gaystay oo taradoodu ahayd illa 2 nin, hase ahaatee mar danbe oo muddo bil ah ka soo wareegtay dilkaasi ayaa ciidanka bileysku ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan mid ka mid ah raggii ka danbeeyey dilkii xildhibaan Ibraahim Cilmi Gaab, kaasi oo aan wali maxkamad la soo taagin.
Isla habeenkaasi 11-ka November ee sanadkii tagay ee 2009-ka, magaalada Boosaaso waxaa lagu dilay guddoomiyihii maxkamadda darajada 1-aad ee gobolka Bari alle ha u naxariistee garyaqaan Maxamed Cabdi Awaare, waxaana sidoo kale dilkiisa fuliyey labo nin oo ku hubaysanaa baskoolado, kuwaasi oo iyana markii fal danbiyeedka ay gaysteen fakaday, hase ahaatee raggaasina bileysku waxay sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen muddo kadib inkastoo aan wali saxaafadda la tusin meel maxkamad lagu soo taagay.
Bishii ugu danbeeysay ee sanadkii dhammaaday ee December, waxaa magaalada Garoowe bambo gacmeed lagu weeraray gaari uu saarnaa guddoomiyaha golaha wakiillada Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, waxaana weerarkaasi fuliyey rag tiradooda lagu qiyaasay illaa 4 nin, kuwaasi oo isku dayey in ay baxsadaan, hase ahaateen ciidanka ammaanka ay ku guulaysteen qabashadooda maalintii ka danbaysay habeenkii weerarku dhacay.
Sanadkii tagay ee 2009, waxaa kaloo meelo kala duwan oo Puntland ah lagu dilay mas?uuliyiin badan oo ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii gobolka Karkaar Yaasiin Siciid Xuseen iyo Saraakiil iyana ka tirsanaa ciidamada ammaanka kuwaasi oo labo ka mid ah lagu dilay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar.
Sanadka cusub ee haatan aynu ku jirno bishiisii 1-aad, ayaa isna u muuqda mid saan-raacay sanadkii la soo dhaafay ee 2009, waxaana bishaan gudaheed la dilay labo xildhibaan oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Puntland.
5-tii Bishaan Jannaayo ee aan hadda ku gudaha jirno, magaalada Boosaaaso, waxaa lagu dilay xildhibaan Cabdullaahi Cali ?Kaarad?, oo ka mid ahaa xildhibaannada baarlamaanka ee laga soo doorto gobolka Bari.
Dilka xildhibaanka waxaa gaystay nin baskoolad ku hubaysnaa, xilligii uu sii galayey masaajid ku yaalla meel ku dhaw gurigii uu ka degganaa magaalada Boosaaso, waxaana isla markiiba ciidamada ammaanka iyo shacabkoo is-kaashanaya u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan ninkii dilkaasi ka danbeeyey, kaasi oo illaa iyo haatan lagu hayo magaalada Boosaaso.
Dilkii ugu danbeeyeyna wuxuu dhacay xalay oo Bisha Jannaayo ay ahayd 19, waxaana bartamaha magaalada Boosaaso lagu toogtay alle ha u naxariistee xildhibaan Maxamed Cabdi Jabriil ?Daqarre?, waxaana dilkiisa gaystay labo nin oo ku hubaysnaa baskoolad iyo qoriga AK47-ka loo yaqaanno.
Ciidamada ammaanka ayaa isla markiiba goobtaasi isku gadaamay, waxaana ciidamada u suurto gashay soo qabashada labdii nin ee ka danbeeyey dilka xildhibaanka Maxamed Cabdi Jabriil ?Daqarre?.
Inta badan dadkii gaystay falal danbiyeedyadii ka dhacay Puntland ayaa gacanta lagu hayaa, kuwaasi oo badankoodu ah maxkamad sugayaal, iyagoo haatan ciidamadu bileysku ay wadaan biiritaannada ku aaddan ragga la hayo, waxaana wakhti dhaw la filayaa si siman in hal mar loo wada maxkamadeeyo dadkii gaystay falal danbeedyada toogashada iyo bambaanooyinka iskugu jiray.
Inkastoo falal danbiyeedyo abaabulan ay ka dhacaan Puntland, haddana deegaannada Puntland waxaa lagu tilmaamaa kuwo aad u xasilloon marka loo fiiriyo Soomaaliya iyo wadamo fara ku tirid ah adduunka ka mid ah.
Dhawaan dawladda Puntland waxay soo saartay go?aamo wax ku aal ah oo ku saabsanaa wax ka qabashada xaaladda nabadgalyada ee dhammaanba deegaannada Puntland, waxayna wacad ku martay in ay ammaanka gacan bir ah ku qaban doonto, haddaba loo joogee Puntland iyo waxa ay ka badasho amniga.
Xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Puntland oo lagu dilay Bossaso & gacan ku dhiigle la qabtay.